हेर्दा सामान्य लाग्ने करीनाले लगाएको यो टि-शर्टको मुल्य थाहा पाए पछि पर्नु हुनेछ चकित
अषोज ३०, २०७८ शनिबार 67
करीना कपूरले शनिबार आमाबुबाको घरमा क्वालिटी टाइम बिताएकी थिइन्। उनले बुबा रणधीर कपूर, आमा बबिता कपूर र बहिनी करिश्मा कपूर संग पारिवारिक फोटोहरु साझा गरीन्। यस अघि उनी दुबै छोराहरु संग आफ्नो घर छोडेको देखिएको थियो। यी तस्वीरहरुमा करीना एक सेतो टी शर्ट ‘हार्टब्रेकर कोट संग देखिएको छन् । यो साधारण देखिने टि शर्ट को मूल्य जानौं।
यो टी शर्ट क्रिश्चियन डायर द्वारा एक ग्राफिक टी शर्ट हो । जसको मूल्य तपाइँको होश उडाउनेछ। यो हर्ट ब्रेकर उद्धरण संग यु शर्ट को मुल्य अमेरिकी डलरमा ८४० मूल्य छ ।करीनाले आफ्नो लुक न्यूनतम मेकअप, न ग्न ओठ कलर र बन कपालको लुक दिएकी छन् ।
उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा तैमूरको साथमा आफ्नो टी शर्ट देखाइरहेको एक तस्वीर साझा गरीन् । यो लेखिएको थियो( ुमेरो टी शर्ट टिम मा के छ ? करीनाका दुई छोरा तैमुर र जे उनीसँगै थिए। पापाराज्जीले खिचेको फोटोमा करीनाले छोरा जेहलाई काखमा समातेको देख्न सकिन्छ।
Prevमलेशियन केटीको कारण भोली मेरो तामिल संग फा;ईट पर्छ, मलाई मा’र्छ भनेका दिनेश भोलीपल्ट मृ’त भेटिए ?
Nextकस्तो अचम्म ! बिदेशी चेलिले नेपाली सरकारी स्कुलमा यसरी पढाउदै ,नेपाली प्रष्ट बोल्छिन् उतिकै सुन्दरि (हेर्नुस् भिडियो )